मेयर बजगाईको कार्यकक्षमा आगजनी – Rapti Khabar
2021, April 21, Wednesday
Nepali Online News Portal
मेयर बजगाईको कार्यकक्षमा आगजनी
कैलाली : लम्कीचुहा नगरपालिकाको कार्यकक्षमा शनिबार राती आगजनी भएको छ । अज्ञात समूहले मेयर महादेव बजगाइको कार्यकक्षमा आगजनी गरेको लम्की प्रहरीले जनाएको छ ।
मेयरको कार्यकक्षको झ्यालको सिसा फुटाइएको छ भने झ्याल नजिकै एक हतौडा र पेट्रोल भरिएका २ वटा बोत्तल भेटिएका छन् । उनीहरुले झ्यालबाटै फालेको आगो लागेर मेयरको कुर्ची र टेबललगायतमा क्षति पुगेको जनाइएको छ ।
लम्कीका प्रहरी निरिक्षक ज्ञानेन्द्र चन्दले आगजनी नै गरेको हो भन्न नसकिने बताए । उनले विद्युत ‘पावर कन्ट्रोल’बाट आगो निस्केको देखिएको र घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
छोटिँदै दिन, कति घण्टा घट्यो ? [तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानसहित]
Posted on September 29, 2020 Author Rapti Khabar
काठमाडौं, असोज १३, औपचारिक रूपमा वर्षा याम (मनसुन) बिदा हुन बाँकी रहे पनि मुलुकमा हिउँद (जाडो) यामका लक्षण सुरु भइसकेका छन्। सामान्यतया नेपालबाट मनसुन बाहिरिनुपर्ने मिति यही सेप्टेम्बर २७ हो। तर भनेकै दिन यो बाहिरिँदैन। दुई चार दिन तलमाथि पर्छ। अझ केही वर्षयता मनसुन अलि लामो समयसम्म रहने गरेको छ। यसपालि पनि मनसुन बाहिरिन अझै […]
प्रेममा बफादार हुन्छन् यस्ता युवतीहरु, छोड्दैनन् पार्टनरका हात
Posted on September 2, 2020 Author Rapti Khabar
केही युवतीहरु युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् भने कोही युवतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम गर्छन । प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु आफैमा बौद्धिक हुन्छन् । उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरु कस्ता हुन्छन् होला ? उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र उनीहरुको प्रेम कति […]
आज २०७७ असोज १९ गते सोमबाट तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
Posted on October 4, 2020 Author Rapti Khabar
मेष सोखले खर्च बढाए पनि मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन(अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ । लगानी बढाउनुपरे पनि व्यवसाय थालनी हुनेछ। प्रेमको बन्धन कसिनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। तर कामको सन्दर्भमा विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला । […]
विद्रोह गरिरहनु पर्ने किन ?
सिंगापुर बोलाउँदा पारससँग सन्दीप रिसाए ? यस्तो भन्‍छन् उनी
आज २०७७ मङ्सिर २३ गते मंगलबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
अष्ट्रेलियाका कुन कुन ठाउँमा जाँदा पीआर पाउन सहज हुन्छ ? हेर्नुस
भक्तपुर दुर्घ’टना: मृ’तक रियाका श्रीमानले उठाए यस्ता प्रश्न, अब के हुन्छ ?
पाइलट बन्न के योग्यता चाहिन्छ ? कति लाग्छ खर्च ? हेर्नुस
2020 raptikhabar.com | All Rights Reserved. | Eggnews by Theme Egg.